★မြန်မာ့အလင်း★: ကုလားလိမ်ကြောင်း လူသိအောင် လုပ်မှဖြစ်မယ်
အခုတလော မွတ်ဆလင်မြန်မာတွေက သွက်လက်နေပြီး သူတို့ ကုလားတွေအတွက် ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာ ကျုပ်တို့တွေက လက်ပိုက်ကြည့် နေမှာလား? ရိုဟင်ဂျာတွေကို မြန်မာ မွတ်ဆလင် နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်မီဒီယာတွေက ကျောထောက်နောက်ခံ ပေးထားပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လူအများစုက ကုလားတွေကို မြန်မာပြည်မှာ နေခွင့်ပေးသင့်တယ်ဆိုတာမျိုး ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီတော့ ကုလားတွေ လိမ်တယ်ဆိုတာကို ပါးစပ်က အချင်းချင်းပြောနေလို့ မလုံလောက်တော့ဘူး။ တောက်ခေါက်နေလို့လဲ အကျိုးမထူးပါဘူး။ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တာလေးတွေကို လုပ်မှဖြစ်မယ်။
အရင်ဆုံးသိရမှာက ဒီပြဿနာဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ မြန်မာမွတ်ဆလင်တွေနဲ့ မီဒီယာတွေကြောင့် ချည်လုံးထွေးကြီးလို ဖြစ်သွားသွားတာ။ နောက်ပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေ တိုင်းရင်းသား ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကလဲ အရေးမကြီးဘူး။ မြန်မာပြည်က လာတယ်ဆိုတာ သက်သေမပြနိုင်ရင် ခေါင်းထဲ ထည့်စရာမလိုဘူး ။ စဉ်းစားကြည့်နော်.. ဥပမာ ကနေဒါလူမျိုး ဇနီးမောင်နှံက နိုင်ငံပြင်ပမှာ ကလေးမွေးရင် အဲဒီကလေးက အလိုအလျှောက် နိုင်ငံသား မဖြစ်ဘူးဗျ။ အဲဒီကလေးအတွက် နိုင်ငံသား လျှောက်ပေးရတယ်။ အဲဒီတော့မှ ကနေဒါနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း စာရွက်ထုတ်ပေးတာ။ စာရွက်မရှိပဲ ကနေဒါတိုင်းရင်းသားမိဘက မွေးလို့ ကနေဒါ လူမျိုးဆိုပြီး လာအ်ာလို့ မရပါဘူး။ အဲလိုပါပဲ ကုလားဒိန်တွေဟာ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားတွေ ပြသဖို့ လိုပါတယ်။ ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းအရ ဘယ်သူမှ မှတ်ပုံတင်မရှိဘူးတဲ့။ ဘာ အထောက်အထားမှ မရှိတဲ့သူကို ကျုပ်တို့က လက်ခံရမယ်ဆိုတာ တရားသလား? ဒီမိုမွတ်ဆလင်တွေနဲ့ ဒီမိုမီဒီယာတွေက တွန်းအားပေးနေတာ ဘာသဘောလဲ? ကျနော်တို့ လူမျိုးကို အနိုင်ကျင့်တာ ပဲဗျ။ ဒါဆိုရင် အထောက်အထားမရှိပဲ အမေရိကန်လူမျိုးလို့ ပါးစပ်ကပြောမယ်.. ဒင်းတို့ အမေရိကန်ကို ပို့ပေးမလား?
ပြဿနာက ရှင်းပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ကုလားဒိန်တွေ ထိုင်းကို လူမှောင်ခိုကူးတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒီထက်ဘာမှ မပိုဘူး။ Immigration ဥပဒေအရ အရေးယူရမှာ ထိုင်းတာဝန်ပါ။ ဗိုလ်ချုပ်မောင်အေးက ဘာတွေ သဘောကောင်းပြီး ဖြေရှင်းချင်တာလဲ? အလကားကို လျှာရှည်တဲ့ အဖိုးကြီး။
ကျနော်တို့လူငယ်တွေ အုတ်တစ်ချပ် သဲတပွင့် အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာ အတွက်လုပ်ကြရအောင်ဗျာ။ ကုလားတွေလိမ်နေတာ မြန်မာလူထုနဲ့ ကမ္ဘာကို အမှန်အတိုင်းသိအောင် လှုပ်ရှားမှဖြစ်မယ်။ ဒါဆိုရင် ကုလားလူလိမ်တွေ နည်းနည်းလေး နောက်ဆုတ်သွားပါမယ်။ (ရှက်လို့တော့ မထင်နဲ့) တင်ပြရမယ်လိုထင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို စုဆောင်းပေးထားပါတယ်။
ပထမအချက်က ကုလားတွေ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထွက်ပြေးလာတာ မဟုတ်ကြောင်းနဲ့ ဒုက္ခသည်အဖြစ် လိမ်ညာဟန်ဆောင်နေသူတွေဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပါ။ ရိုဟင်ဂျာဟာ တိုင်းရင်းသားမဖြစ်ဘူးဆိုတာကို သိပ်ပြီး အလေးပေးမပြောပါနဲ့။ အခုပြဿနာက ရိုဟင်ဂျာတွေ တိုင်းရင်းသား ဟုတ်မဟုတ်က အဓိကမဟုတ်ဘူး။ ဒီကောင်တွေ မြန်မာပြည်က မဟုတ်ရင် ဘာမှကို စဉ်းစားပေးဖို့ မလိုဘူး။ အဲဒါအတွက် မှတ်ပုံတင်သူတို့မှာ မရှိတာက အကောင်းဆုံး သက်သေလို့ မြင်ပါတယ်။ လူ၃၀၀ မှာ တစ်ယောက် နှစ်ယောက်ပဲ မှတ်ပုံတင်ရှိတယ်ဆိုတာ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ မှတ်ပုံတင်ဟာ ငွေပေးရင် လုပ်လို့လွယ်ကြောင်း ပြောပြပါ။
သူတို့ဟာ ဒုက္ခသည်အတုတွေဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပါ။ ဒုက္ခသည်အတုဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြဖို့ မသင်္ကာစရာ အချက်တွေကတော့ ခက်ခဲတဲ့ ရေလမ်းကိုေ၇ွးချယ်ပြီး ထွက်ပြေးတဲ့ ကိစ္စ၊ ထိုင်းနဲ့ ရခိုင်ဒေသ ရေလမ်း ဘယ်လောက်အထိ ရှည်လဲ သိအောင် မြေပုံနဲ့ ပြပါ။ နောက်ပြီး ရေခရီးက ဘာကြောင့်ထိုင်းပဲ ဦးတည်သွားလဲဆိုတာလည်း မေးခွန်းထုတ်စရာပါပဲ။ အနောက်ဖက်မှာ သူတို့ကုလားနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယလည်းရှိတာပဲ။ (ထိုင်းက ကုလအရာရှိ၊ ထိုင်းအစိုးရ တာဝန်ခံတွေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ လူကုန်ကူးသူတွေ အပေးအယူလုပ်ထား သလား?) တကယ်ဒုက္ခသည်ဆိုရင် နယ်ချင်းစပ်နေတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောပြပါ။ မိန်းမတွေနဲ့ ကလေးတွေ မပါတဲ့ ကိစ္စတွေဟာလည်း တကယ်ကို သိသာလွန်းတဲ့အချက်ပါ။ ကုလားတွေလိမ်တာ မျက်စိထဲမြင်လာအောင် ရိုဟင်ဂျာဓါတ်ပုံတွေနဲ့ တခြားဒုက္ခသည်တွေဓါတ်ပုံကို ယှဉ်ပြီးပြပါ။ တခြားဒုက္ခသည်တွေက မိသားစုနဲ့မြင်တွေ့ရပြီး ကုလားတွေကတော့ လူငယ် လူရွယ်တွေချည်းဖြစ်နေပါတယ်။
နောက်ပြီး AlJazeera သတင်းမှာပါတဲ့ ပလီဆရာကြီးငိုနေတာကို ရှင်းဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကုလားတွေဟာ ဟန်ဆောင် ငိုတဲ့နေရာမှာ မိန်းမတွေထက် တော်ကြောင်း သက်သေဗီဒီယိုနဲ့ ပြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒီဗီဒီယိုမှာ ဆိုရင် ကုလားပလီဆရာ ဟန်ဆောင်ငိုတာ သိသာလွန်းပါတယ်။ အဲဒါကိုပြလိုက်ပါ။ ပထမပြောတုံးက မြန်မာစစ်တပ်က ဓါတ်ဆီတောင် ပေးလိုက်တယ်တဲ့။ သတင်းပြီးခါနီးမှာ သူတို့ပြန်သွားရင် အသတ်ခံရမှာသေခြာတယ်ဆိုပဲ။ ကုလားတွေ လိမ်ချက်ကတော့ တကယ်ကို အရှက်ကင်းတယ်နော်.... သူတို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် နှိပ်စက်ခံရတယ်လဲပြောတယ် ဒဏ်ရာလဲ ကောင်းကောင်းမရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ဗီဒီယိုက မြန်မြန်ရိုက်ပြတယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီလောက်အချက်အလက်ဆိုရင် ကုလားတွေ လိမ်ကြောင်း လူတိုင်းလက်ခံလောက်မှာပါ။ (မြန်မာ မွတ်ဆလင်တွေ ကတော့ လက်ခံမှာ မဟုတ်ပါ) လူတွေက သူတို့ လိမ်တာ သဘောပေါက်လာရင် ရိုဟင်ဂျာဟာ တိုင်းရင်းသားပါဆိုတဲ့ ကိစ္စပါ လိမ်ညာတယ်ဆိုတာ မြင်လာပါလိမ့်မယ်။ အထက်က အချက်အလက်တွေကို နိုင်ငံတကာနဲ့ မြန်မာတွေသိအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စ မြန်မာနဲ့ လုံးဝ မပါတ်သက်ဘူးဆိုတာ ပြောပြဖို့လိုပါတယ်။ လူမှော်ခိုကူးမှု တစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါ။ ကျနော်တို့ တောသားနှစ်ယောက်ဟာ ကျောင်းသားနဲ့ အလုပ်လုပ်နေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အချိန် သိပ်မပေးနိုင်ပါဘူး။ မြန်မာစာ အရေးအသားကလဲ အဆင်မပြေလှပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်လိုရေးဖို့ကလည်း အချိန်မရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်အတွက် ဒီထက်ပိုပြီးလုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ တခြားမြန်မာတွေကလည်း နည်းနည်းပါးပါး ကူညီမှ ဖြစ်ပါမယ်။
မြန်မာလူမျိုးအဖြစ် တာဝန်ကျေချင်တယ်ဆိုရင် . . . အချိန်လဲ အများကြီးပေးဖို့မလိုပါဘူး။ ဓါတ်ပုံတွေ သရုပ်ပြပုံတွေ အသုံးပြုပြီး PDF နဲ့ ဆောင်းပါးရေးပါ။ scribd.com မှာတင်ထားပါ။ presentation ဗီဒီယိုလုပ်ပါ။ စကားပြော အသံထွက်စရာမလိုပါဘူး။ စာလုံးနဲ့ရေးထားပြီး တီးလုံးနောက်ခံထည့်ထားပါ။ Youtube.com မှာတင်ထားပါ။ အင်္ဂလိပ်နဲ့ မြန်မာလိုလုပ်ထားပါ။ တကယ်လို့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာအခက်အခဲရှိရင် မြန်မာလိုပဲ လုပ်ပါ။ ဆောင်းပါးရေးတတ်တဲ့ သူကဆောင်းပါးရေးပေါ့။ ဗီဒီယိုလုပ်တတ်တဲ့သူကလဲ လုပ်ပေါ့။ အဲလိုလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ လူတွေသိအောင် ဖြန့်ရပါမယ်။ ဖြန့်ရင် မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် ဘလော့တွေကို စာပို့ပြီး သူတို့ဘလော့မှာ တင်ခိုင်းပါ။ ဆီပုံးတွေမှာ ရိုဟင်ဂျာ လူလိမ်တွေအကြောင်း ရှင်းပြပြီး အခုဆောင်းပါးနဲ့ ဗီဒီယိုလင့်တွေကို ဖြန့်ချိပါ။ နိုင်ငံခြားသားတွေ အတွက်တော့ လူသိများတဲ့ Forum တွေမှာ သွားပြီးဆွေးနွေးပါ။ တင်ပြပါ။ http://www.faithfreedom.org/ နဲ့ http://www.prisonplanet.com/ တို့ဟာ အသင့်တော်ဆုံးလို့ မြင်ပါတယ်။
ကုလားတွေဘာဖြစ်တယ်.. ညာဖြစ်တယ် ဆိုပြီး စကားတွေပြောနေရုံနဲ့တော့ အကျိုးရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကလည်း တဖြေးဖြေးနဲ့ သူတို့ဘက်ကနေအောင်မြင်မှုရ နေပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့် အချိန်ရရင် မိမိတို့ တတ်နိုင်တဲ့အနေအထားကနေ တိုင်းပြည်အတွက် ကူညီပါ။ ဆောင်းပါး မရေးတတ်ဘူး၊ ဗီဒီယိုလဲ မလုပ်တတ်ဘူးဆိုလဲ စိတ်မပူပါနဲ့။ ဘလော့တွေက ဆီပုံးတွေမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေ လိမ်တဲ့အကြောင်း လိုက်ပြောပါ။ ရိုဟင်ဂျာကို ထောက်ခံတဲ့ ဘလော့တွေကို ပြစ်တင်ပါ။ အဲလိုမျိုး မိမိတတ်နိုင်သလောက်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ကုလားလူလိမ်တွေကို ကြောက်ဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ ဘလော့တွေမှာ စာတွေဖတ်ယုံပဲ ဖတ်ပြီးလုပ်နေမယ့်အစား.. အုတ်တစ်ချပ် သဲ တစ်ပွင့် လုပ်ကြပါဦးဗျာ။ နောက်ထပ်ပြောပါမယ်။ ရခိုင်တွေကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 9:20 AM
ရေးတာ အရမ်းသဘောကျတယ်ဗျာ...မြန်မာပြည်ထဲက လူတွေသိဖို့အရေးပိုကြီးတယ်ထင်တယ်ဗျ...အများစုက ပြည်ပရောက်နေတဲ့လူတွေပဲအင်တာနက်ကြည့်တာများတယ်လေ..မြန်မာပြည်က
အထူးလေးစားရပါသော ကိုအောင်တင်ခင်ဗျား ။
ရိုဟင်ဂျာများသည် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများဖြစ်ဖို့ဝေလာဝေး ၊ လူသားစစ်စစ်ဟုပင် မသတ်မှတ်နိုင်ပါ ။
ကိုရမ်ကျမ်းတော်မြတ်အရ ပြောရမည်ဆိုလျင် ၊ အလာဟ်အရှင်တော်မြတ်က အပျင်းပြေသဘော ရွှံ့ဖြင့်ဖန်တီးထုတ်လုပ်လိုက်သော ရွှံ့မျိုးရွှံ့နွယ်မှဆင်းသက်လာကြသည့် ရွှံ့သားများသာဖြစ်ကြပါသည် ။
ထို့ပြင် ကိုရမ်ကျမ်းတော်မြတ်အရ ရိုဟင်ဂျာများသည် လွတ်လပ်သူများမဟုတ်ကြပါ ။ အလာဟ်အရှင်က ထုတ်ပြန်ထားသော ဥပဒေကိုကျူးလွန်ထားကြသည့်အတွက် အပြစ်သားများအဖြစ်ကို ခံယူထားကြရသူများ ခေတ်စကားနှင့်ပြောရလျင် ဝရမ်းပြေးများသာ ဖြစ်ကြပါသည် ။ သည့်အတွက် ရိုဟင်ဂျာများက မြန်မာတိုင်းရင်းသားခံယူလိုလျင် အကြံပြုလိုသည်မှာ လူသားစစ်စစ်အဖြစ်ကို ဦးစွာခံယူသင့်ပါသည် ။ ၄င်းနောက် ရိုဟင်ဂျာများသည် အပြစ်သားများ(တရားခံပြေးများ)မဟုတ် ကြောင်း နှင့် ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်ကို အလာဟ်အရှင်တော်မြတ်ထံမှ ရယူထားဖို့လိုပါလိမ့်မည် ။
ရိုဟင်ဂျာများကို မြန်မာတိုင်းရင်းသားစာရင်းတွင်ပါစေလို၍ သဘောရိုးဖြင့်တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျား ။
လူတိုင်းလူတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိမရှိ ကိစ္စကို ၊ ဟန်ဂုရွာသားများနှင့် မြန်မာအစိုးရထံမေးမြန်းမည့်အစား အလာဟ်အရှင်မြတ်ကြီးထံတိုက်ရိုက် မေးမြန်းခြင်းက အသင့်တော်ဆုံးနှင့် အမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မည် ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ မည်သည့်ဘာသာကိုမဆို ပြောင်းလဲကိုးကွယ်ခွင့် ၊ စင်ပြိုင်ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိပါသည် ။ မည်သည့်အရာကို မဆို ကိုးကွယ်လိုက ကိုးကွယ်ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါသည် ။ ဗုဒ္ဓက ၄င်းကိုသာ ကိုးကွယ်ရမည်ဟု ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ဗုဒ္ဓကို ကိုးကွယ်ရန်လည်း ဗုဒ္ဓက မတိုက်တွန်းပါ ။ ဗုဒ္ဓ၏ သွန်သင်ချက်များကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်သဖြင့် ကိုးကွယ်နေကြခြင်း ၊ ဗုဒ္ဓမရှိတော့သဖြင့် ဗုဒ္ဓကိုယ်စား ရည်မှန်း၍ ရုပ်ပွါးတော်များကို ရည်စူးကိုးကွယ်နေကြခြင်းသာဖြစ်ပါသည် ။
အလာဟ်ကြီးကကော ၊ ဗုဒ္ဓလို အဲသလိုမျိုး သဘောထားကြီးစွာဖြင့် ခွင့်ပြုထားပါသလား ။
၄င်းအပြင် ၊ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ပေးခြင်းသည် ၊ လူသတ်ခွင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း မဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မည် ။
အာဏာရှင်ဘုရား(ဘုရားအာဏာရှင်) အလိုမရှိ ။ အာဏာရှင်ဘုရားနောက်လိုက်များအလိုမရှိ ။ အကြမ်းဖက်ဘုရားအလိုမရှိ ။
ခင်ဗားတို့ ပဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ချိုက်မဲ့အစား ၀ါဒရေးရာအရ ၀ါဒရေးရအြရ တိုက်ခိုက်ကြပ်ပလား
ကျွန်တော်တို့ ဘာအတွက် ဘာသာတရားကို ကိုးကွယ်ကြတာလဲ။
ရည်ရွယ်ရာပန်းတိုငခြင်း မတူဘဲ ငြင်းနြေ၊ တိုက်ခိုင်နေကြရင် အလကားဘဲ
ကျွန်တော်တို့ ဘာသာက အေးငြိမ်းခြင်း အစစ်အမှန် ကိုရှာဖွေတာပါ။
ကုလားတွေ မြန်မာပြည်မှာ ခွေးလိုး လိုး ပီး
လူအင်အားများလာရင် ဗုဒ္ဒဘာသာတွေရဲ့ 
နောင်ရေး ဟာ ရင်လေး စရာကြီးပါ ။မြန်မာမတွေ ဟာ ကုလားတွေ လိုးတာခံကြရမယ်။
မြန်မာယောင်္ကျားတွေ လည်လှီး သတ်ခံ ကြရမယ်။။ဒါတွေ က ဗေဒင်ဟောစရာမလိုဘူး
မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ ဖြစ်လာမှာ.စိုးရီမ်လို့ ပါ...ကုလားတွေ အင်အားကောင်းရင်။ အဲလိုဖြစ်မလာအောင်
အဲဒီတော့ မြန်မာဗုဒ္ဒဘာသာတွေ ဘယ်လိုလဲ
စဉ်းစားကြပါ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလို နေလိုက်ကြမယ် ဆိုရင်တော့ ခင်များတို့ ရဲ့မျိုး ဆက်တွေ ကုလားလိုးတာခံ ကြရမှာပါဘဲ။။။။မြန်မာတွေ စည်းလုံးကြပါ။
ဟေ့ေ၇ာင် aungzay မြန်မာပြည်မှာဂေါတမကုလား
ရင့်သီး၊ရိုင်းပြစွာ ရေးသားခြင်းများကို ဖျက်သင့်ပါသည်..အထူးသဖြင့် ဘာသာရေး ကိုဆဲရေးခြင်း ( လုံးဝလုံးဝ ) မလုပ်သင့်ကြောင်း အကြံပေးလိုပါသည်....